true dynamics /zu-ZA/tools-for-life/dynamics/steps/the-dynamics.html read 2 4 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/dynamics_zu_ZA.jpg Ama-Dynamics Obukhona
Ngokuhlola uMuntu uqobo, wonke umuntu ubonakala enesifiso sokusinda kuyileyo naleyo dynamic. Ukwenza isibonelo, umuntu angaba nentshisekelo ekusindeni kwamaqembu (i-Dynamic yesiThathu) njengoba nje enentshisekelo ekusindeni kwakhe (i-Dynamic yokuQala). Angase athande ukuzivocavoca futhi agcine umzimba wakhe uqinile njengoba nje ekujabulela ukusebenza kanzima ukusiza iqembu lakhe lebhola ukuphumelela emdlalweni.
Lapho nje ususa noma wenza ntekenteke enye yama-dynamics, umuntu uqala ukuthwala kanzima. Ukwenza isibonelo, uma umuntu engavunyelwe ukuba yingxenye yanoma yiliphi iqembu noma iqembu (i-Dynamic yesiThathu), angaqala ukuzizwa engafunwa futhi ne-Dynamic yakhe yokuQala iyehla. Kuyehla ukusiza kwakhe umndeni wakhe okuwukuthi (i-Second Dynamic) nayo iyahlupheka, izinto zibhede. Onke ama-dynamics akhe ayancipha. Ngakho-ke siyabona ukuthi uma kwenzeka okuthile kunciphisa ukusinda kweyodwa idynamic, kungathinta namanye ama-dynamics. Uma uzilimaza bese ugcina usesibhedlela, ngaleyo ndlela kulimaze ukusinda kwe-Dynamic yakho yokuQala, lapho-ke kungenzeka ukuthi ulahlekelwe ngumsebenzi wakho futhi ungabe usaba yingxenye yeqembu lakho lasemsebenzini (i-Dynamic yesiThathu) yakho. Ungahle futhi ulahlekelwe umhholo wakho kufuneke nemali enkulu yokukhokhela udokotela futhi lokho kungasho ukuthi umndeni usunemali encane yokuthenga izimpahla zokugqoka, ukudla nendlu yekhaya (i-Dynamic yesiBili) yakho.
Sonke isijumba sawo wonke ama-dynamics ayisishiyagalombili sibalulekile ekusindeni kwanoma yimuphi umuntu.
Emphakathini wanamuhla, abantu bafundiswe ukukholelwa ukuthi “Umuntu uzicabangela yena yedwa.” Abanye abantu kufuneka baphoqwe, babhaxabulwe, bashaywe ukuthi bafunde ngisho nokuba ne-Dynamic yesiThathu. Kufuneka bavalelwe emajele. Kufuneka bathunyelwe esikoleni. Kufuneka bajeziswe, bahlawuliswe, bakhishiswe intela futhi benziwe ukuba bavote. Abantu bangacabanga ukuthi zonke lezi zinto kufanele zenziwe ukuze nje umuntu abe nayo i-Dynamic yesiThathu.
Kunjalo nange-Dynamic YesiNe (Isintu). Wake wambona yini umuntu owayecabanga ukuthi izinja kuphela ezingumngane omkhulu womuntu nokuthi omunye umuntu akalungile? Lo muntu ugxila kuphela kwi-Dynamic yesiHlanu (izinhlanzi, izinja, amakati, amabhubesi, utshani, izihlahla, izimbali, njalonjalo.). Kuzokulunga kumuntu ukuthi aqhubeke nokuba nalo mbono, kodwa kuphela kuze kufike lowo mbono wehluleka khona, njengoba kungelona iqiniso. Ukwenza isibonelo, ake sithi lomuntu agule kakhulu ngolunye usuku abesecela amakati nezinja zakhe ukuba zimsize aphile. Iqiniso elisobala ukuthi lezilwane azikwazi futhi umuntu ocela izilwane usizo uyehluleka. Ngemuva kwalokho kufanele aye esibhedlela ayothola abanye abantu abazomsiza ukuthi aphile.
Akulona iqiniso ukuthi ikhona eyodwa yalama-dynamics ayisishiyagalombili ebaluleke kakhulu kunamanye. Zonke ziyizingxenye yomdlalo kawonke wokuphila. Kodwa-ke, kuzotholakala phakathi kwabantu abahlukahlukene ukuthi umuntu ngamunye unokunaka kakhudlwana kokunye noma ngaphezulu eyodwa noma ngaphezulu yalama-dynamics kunamanye. Isibonelo, umdlali we-violin kwezomculo angacishe achithe isikhathi sakhe sonke ezijwayeza ukuyidlala imini nobusuku, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto, ukuzama ukuba ngumdlali we-violin ohamba phambili emhlabeni, anganaki umndeni wakhe noma abangane. Lawa amanye ama-dynamics bese ehlupheka futhi amfake enkingeni.
Isizathu sonke sokuba ama-dynamics ahlukaniswe izifiso eziyisishiyagalombili ukwandisa ukuqonda kwakho ngempilo ngokuyihlukanisa izingxenye. Njengoba sehlukanise impilo ngale ndlela, ingxenye ngayinye ingahlolwa ngayinye futhi ihlolwe ukubona ukuthi isebenza kanjani nezinye. Njengoba ukuqonda kwakho ngama-dynamics kukhula, uyakwazi ukusinda kahle kuwo wonke.
Njengesibonelo salokhu, thatha umntwana ongazi lutho ngaphezu kwe-Dynamic yokuQala (Self Dynamic) lapho ezalwa. Kepha njengoba ingane ikhula futhi iba nentshisekelo kwezinye izinto, iyabonakala ukuthi iqala ukusinda nakwamanye ama-dynamics. Ifunda ukuthi umndeni wayo uyiqembu nokuthi inamaqembu abangane (i-Dynamic yesiThathu) uma isiya esikoleni ifunde futhi ngabantu abanye abahlala kwamanye amazwe bese iqaphela ngeSintu (i-Dynamic yesiNe). Ifunda ngezilwane nezinambuzane (i-Dynamic yesiHlanu) manje futhi ingumnikazi wenja nenyoni njengezilwane ezifuywayo, nokunye.
Njengesibonelo esiphikisana nalokhu, cabanga ngomuntu ongakwazi ukuhlala kahle kwi-Dynamic yesiThathu (I-Dynamic yeQembu) futhi ongakuthandi ukuba yingxenye yeqembu. Omunye onjena ukubhekeka njengokuthi akanabo abantu aphilisana nabo—uphila impilo yakhe yedwa futhi akayona ingxenye yanoma iliphi iqembu nabanye.
Manje wenza kanjani ukuze usebenze ngempumelelo kuwo wonke ama-dynamics? Indlela yokwenza lokhu ukufunda ukuthi ungasinda kanjani ngokusemandleni akho kwi-dynamic ngayinye. Ngokubambisana, lama-dynamics ayisishiyagalombili onke asimamisa ukusinda kwakho empilweni.